စက်မှုအပ်ချုပ်စက်အပိုပစ္စည်းများ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -sewingmachineaccessories.com.tw
အပ်ချုပ်စက် Thread Cutter
Hongcheng Precision Industry Co., Ltd. ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူအတွက်အထူးပြု စက်မှုအပ်ချုပ်စက်အပိုပစ္စည်းများရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan။ ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တန်ခိုးအဖြစ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကြာပါသည်။ ဒါဟာအဆက်မပြတ်အသစ်ထွက်ကုန်သီးနှံသုတေသန, ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသူ့ကိုယ်သူတင်နိုင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားနိုင်ငံတကာကျော်ကြားကုမ္ပဏီများအတွက်ရေရှည်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်အဆွေခင်ပွန်းတို့နှင့်အတူစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်ရန်ဆန္ဒရှိ, နှင့်ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပိုမိုဘုန်းပွင့်မနက်ဖြန်ဖန်တီးရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ ငါတို့သည်လည်းပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ 'မိတ်ဆွေထံမှအဖိုးတန်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုခံယူခြင်းငှါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ၌ကောင်းသောအောင်မြင်မှုများကိုဖန်တီးကြစို့
အတူတကွanice မနက်ဖြန်ထွက်သွားပါ။
ပုံစံ - FX-1645
Kansai အထူးကုမ္ပဏီသည်လူကြိုက်အများဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်-အပ်အပ်စက်ပေးသွင်းသူ.ကျနော်တို့မစ္စတာနှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိသည်.Morimoto,Kansai အထူးသူဌေး.မစ္စတာ.Morimoto သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအပိုပစ္စည်းများကိုအမြဲရှာဖွေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ စီးပွားရေးစတင်ခဲ့သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sewingmachineaccessories.com.tw/my/industrial-sewing-machine-spare-parts.html
သို့: Hongcheng Precision Industry Co., Ltd.
မစ်ဆူဘီရှီမော်ဒယ်လ်အပ်ချည်ထိုးအဆို့ရှင်MN50A0838/MN50B0838 အပ်ချုပ်စက်၏ဓါးများသည် Mitsubishi မော်ဒယ်လ် LT2 အတွက်ဖြစ်သည်-230.ဒီဓားတွေကိုရွှေဘီးဆီရောင်းပါတယ်.အလွန်ကောင်းသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်.ဒါဟာအစကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်.
စက်မှုအပ်ချုပ်စက်အပိုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်မှုအပ်ချုပ်စက်အပိုပစ္စည်းများ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ -ကျော် 51,725 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ sewingmachineaccessories.com.tw
Pegasus မော်ဒယ် Overlock ဓါး202295/201121A အပိုပစ္စည်းနှစ်ခုသည်အပ်ချုပ်စက်များတွင်အသုံးများဆုံးနှင့်အများဆုံးစားသုံးနိုင်သောဓါးများဖြစ်သည်.ဖောက်သည်အချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှမြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှုကိုရှာဖွေသည်.ကျွန်ုပ်တို့သည်ခက်ခဲသောတောင်းဆိုမှုများနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်.
Tajima အပိုပစ္စည်းများFX0206000000/FX0207000000 အပိုပစ္စည်းများသည်တာဂျီးမားချည်ထိုးစက်များဖြစ်သည်.အချို့ကုန်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ၎င်းတို့ကို ၀ ယ်သည်.ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံသေဓားအတွက်အလွန်အရည်အသွေးမြင့် tungsten သံမဏိကိုရွေးချယ်သည်.ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ ယ်သူတိုင်းအတွက်ကွဲပြားသောအဆင့်ထုတ်ကုန်များရှိသည်.